May Nyane: ကမ္ဘာမှာ ဗမာကျန်ဖို့
၁၉၆၂ မှာ Seven July အရေးအခင်းနဲ့ သူ့ကို ဆန့်ကျင်တဲ့အတွက် ဦးနေ၀င်းက တက္ကသိုလ် ကျောင်းသား တွေကို ဖိနှိပ် နှိပ်ကွပ်ခဲ့တာ သူ့ရဲ့ နောက်ဆုံးချိန်ထိပါပဲ။ အဲလိုပဲ ၁၉၇၄ ဦးသန့် အရေးအခင်း၊ ၁၉၇၆ မှိုင်း ရာပြည့် ကိစ္စ၊ ကျောင်းသားတွေက တာဝန်ကျေခဲ့။ ဦးနေ၀င်းက အခဲမကျေဘဲ ရက်ရက်စက်စက် နှိမ်နင်းခဲ့ တာ ၈၈ ထိ။ နောက် သူ့အမွေခံ ခင်ညွန့် က ၈၈နောက်မှာ သူတို့ကို အုံနဲ့ ကျင်းနဲ့ ဆန့်ကျင်ခဲ့တဲ့ ပြည်သူလူထုနဲ့ ကျောင်းသားတွေအပေါ် နည်းမျိုးစုံနဲ့ နှိပ်ကွပ် ဖျက်ဆီး၊ တကယ့်ကို အငြိုးတကြီး။ နောက်တော့ ၁၉၉၆ မှာ တကြိမ်၊ ကျောင်းသား အရေးအခင်း.. အနှိမ်နင်းခံရ။ ၉၆နောက် မှာတော့ စစ်အစိုးရဟာ ကျောင်းသား ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ရင် အခြေခံပညာကနေ တက္ကသိုလ်ထိကို ဖိနှိပ်ရုံမက ဒုက္ခ အမျိုးမျိုး ရှာကြံပေးတာမျိုး ထိအောင် လုပ်လာတာ အားလုံးအမြင်ပါ။ သူတို့ မူက ပညာတတ် မရှိရေး၊ ကျောင်းသားတွေ ဆင်းရဲဒုက္ခ ရောက်ရေး၊ စစ်တပ်ရှေ့မှောက် မှာ ဦးကျိုးရေးပါ။
တောက်တီး တောက်တဲ့ said...
This article hit my heart as well as real people of our country. You have done with your best.
ဆရာမ အရေးအသားနဲ့ မှန်ကန်တဲ့အဖြစ်အပျက် အလုံးစုံကို အခုဖတ်နေချိန်မှာ မျက်ရည်ဝဲမိတယ် .. ။ နှလုံးသားကို တည့်တည့်ကြီး လာထိပါတယ် .. ။ သမီးတို့လက်ထက်မှာပဲ ဒီစစ်အာဏာရှင်စနစ် အမြစ်ပြတ်အောင် အားလုံးထမ်းဆောင်ကြရမှာပါ .. ။
I like it your post very much, while I reading your post I feel to cry , i think something i lost
muy bien ma may nyane..yo no soy una blogger... he salido de birmania desde 1988 ,, despues de 8888.. quiera hacer algo politico,,, como mis amigos ko mya aye,,, ko min ko naing,,, etc...